Bafuna aphendule uMaimane - Ilanga News
Home Izindaba Bafuna aphendule uMaimane
Bafuna aphendule uMaimane
Kuthiwa uyayazi imigomo yokuziphatha kwamalungu ephalamende
UZALELWE yinja endlini uMnu Mmusi Maimane osolwa ngokutetemuka ngemoto okuthiwa yayiyisipho esiphuma kusomabhizinisi olandelwa yizimpukane zenkohlakalo.
BALINDELE ukuba uMnu Mmusi Maimane ongu-mholi weDA, achazele ikomidi eliqondene nokuziphatha kwamalungu ephalamende (Ethics Committee) ngodaba olusematheni, lokuthi wayetetemuka ngeToyota Fortuner eyabe iyisipho seqembu lakhe esasiphuma kusomabhizinisi olandelwa yiphu-nga elibi lenkohlakalo, uMnu Markus Jooste.
UMnu Maimane ubalwa nosopo-litiki abayiphela endlebeni kuMnu Cyril Ramaphosa ngodaba lwenko-hlakalo.
Ngokombiko wephephandaba elihluza ngavovolinye neNews24, iRapport yayizolo, uMnu Maimane wagoloza ukuyiphindisela emuva le moto naphezu kokwexwayiswa ngozakwabo eqenjini ngengozi yokuthunazeka kwegama lakhe neleDA.
Kuthiwa uMnu James Selfe, ongusihlalo weDA, ukuqinisekisi-le kwiRapport ukuthi impela le moto wayisebenzisa uMnu Maimane kodwa wanxuswa ukuba ayiphindisele emuva, okwathatha isikhashana nokho njengoba waqhubeka wayisebenzisa.
Kuthiwa uvumile nokuthi le moto kwabe kungeyenkampani eqashisa ngezimoto, kodwa yayikhokhelwa yiSteinhoff – uMnu Jooste owayeyisikhulu esiphethe kuyo okuthe uma kuvela izindaba ezimbi ngaye (uMnu Jooste) iDA yabona kumele iphindiselwe emuva, okuyinto abayenza.
Kuzokhumbuleka ukuthi igama likaMnu Jooste belisematheni muva nje, ngezinsolo zokunyonkela amasu okuhweba (insider trading), wukuphekwa kwemibiko yokusebenza kukasomalunda wenkampani iSteinhoff nokugwema intela, okwenza amasheya ale nkampani ezimakethe zemali aphelelwa ngamandla, okwaphe-tha ngokuba kucwile isizumbulu sika-R20 billion esasitshalwe kule nkampani yisikhwama sezimpe-sheni zezisebenzi zikahulumeni.
NgoNcwaba (August) 2017, kwavela imibiko ethi uMnu Jooste ungesinye sezisebenzi zakwaSteinhoff eziphenywa ngabashushisi baseGermany ngecala elisukela enyakeni u-2015, ngayo indaba yokuphekwa kwamabhuku achaza ngokusebenza kwenkampani.
Kuthiwa emuva kwezinyanga eziwu-4 kusukela lapho, wesula njengesikhulu esiphezulu lapho abacwaningimabhuku beshaya amakhala ngokungaqondi kwemibiko yezemali.
Emuva kokuvela kwalezi zindaba, uMnu Maimane unikele kwi-Twitter waloba ukuthi lena yimizamo yokumnyundela ngokuqamba amanga ngaye nomndeni wakhe.
“Bekuhlale kuwumbono wami ukwakha iNingizimu Afrika ebumbene. Ngisamile kulowo mbono noma ngabe kuthiwa ubathunuka kanjani abanye,” kuloba uMnu Maimane.
Njengenjwayeloke uma uMnu Maimane ebhale okuthile kwiTwi-tter – abampisholo bakhwele bazehlela kuye bemtshela ukuthi makakhohlwe yile nsambatheka yeNingizimu Afrika ebumbene, avuke emaqandeni “ngoba laba belungu bakho abanendaba nawe”.
UMnu Mkhuleko Hlengwa, okhulumela i-IFP futhi ongusihlalo wekomidi lezimali ephalamende, uthe uMnu Mmusi Maimane unolwazi ngokuziphatha kabi kukaMnu Jooste neSteinhoff, nangokucwila kuka-R20 billion owawutshalwe yisikhwama sempesheni yezisebenzi zikahulumeni, ngakho balindele ukuba achazele
Previous articleKumenele oshaywe ngumfowabo
Next articleIChiefs icathamela unozinti weBafana